Zintoni ophahleni lwelanga lweTesla kwaye zisebenza njani? Ukuhlaziywa okuluhlaza
Uphahla lweTesla Solar
I-Tesla yinkampani eneqondo eliphezulu lokugqwesa kwitekhnoloji yokusika kunye nokuphuhlisa izinto ezintle kwihlabathi liphela. Inelona nqanaba liphezulu lokugqwesa kwiimoto zombane kwaye ngoku idale inqanaba lobuchwephesha kunye nomgangatho ozinzileyo ojolise ekusasazeni kwihlabathi liphela. Imalunga ne- Uphahla lwelanga lweTesla. Oluphahla lwenzelwe ukuqhuba kumandla elanga nge-photovoltaic kwaye zenzelwe ukunciphisa ixabiso lokuqala kunye nabasebenzi ukuze bafumane izibonelelo ezingcono kunye nokusebenza okuphezulu.
Kule nqaku siza kukuxelela ukuba yintoni uphahla lwelanga lweTesla, ukuba zisebenza njani kwaye ziyintoni.
1 Uphahla lweTesla Solar
2 Iimpawu eziphambili
3 Izinto eziluncedo kophahla lweTesla Solar
U-Elon Musk yi-CEO yeTesla Motors kwaye wabiza uphahla lwelanga lweTesla nge igama leSolar Glass. Injongo yale ndoda kukubeka i-1.000 40 kolu phahla eUnited States phambi kokuphela kwalo nyaka. Itekhnoloji ehambele phambili kakhulu ebonisa ukwehla okubonakalayo kumaxabiso, ukufakelwa kunye neendleko zokugcina. Ngokukodwa, kuyanceda ukugcina i-XNUMX% yexabiso lolunye uphahla ngomsebenzi wamandla elanga nge-photovoltaic.
Oluphahla lwelanga elitsha ubomi beminyaka engama-30, kanye njengexesha layo lewaranti. Kwaye iithayile zayo zinakho ukulingisa uphahla lwe-bucolic slate ngokungathi yinto yendalo. Zifakwe ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo kwaye, ke, yonke into iguqulela kugcino olukhulu kwizinga. Amagqwetha kaTesla aqhubeka nokufaka isicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza ukuze akwazi ukuthotywa kwaye axhase imveliso kwaye aqinisekise ukuthengisa ngokukhuselekileyo nangokukhawuleza.
Ezi tile zenza uphahla lwe-photovoltaic zinonxibelelwano olutsha nolusebenzayo phakathi kweethayile ze-photovoltaic. Zenziwe ngeglasi enobushushu ukuze ziqinisekise amashumi aliqela okuqina kobuthathaka ngokungathi ibilusuku lokuqala. Lo mjikelo wamandla mde kangangokuba ungavumela uphahla luhlale iminyaka engama-30. Enkosi kobu bomi buluncedo obude, busivumela ukuba siphinde sibuyele kutyalo-mali lokuqala ngokukhawuleza. Kwakhona, kufanelekile ukuba ikhankanywe I-40% yokwehla kwexabiso kokubini kufakelo, njengoko ulondolozo ngokubanzi lunokukunceda uhlawule utyalo-mali lwakho kwakamsinya.
Nokuba ubungqina bobomi buyakhawuleziswa ngokukhawuleza okukhona kunokubakho ixesha elincinci lokwenza. Ayinamsebenzi nemvula, iimeko zemozulu ukuba iyakwazi ukumelana nezikhukula, isichotho iimpembelelo, phakathi kwezinye iimeko ezibi zemozulu. Iyakwazi ukubamba iibhola zesichotho ukuya kuthi ga kwiisentimitha ezi-5 ububanzi ezichaphazela isantya seekhilomitha ezili-160 ngeyure.
Olunye lweempawu eziphambili ezinokuphucula ukusebenza kophahla lwelanga lweTesla kukuba zinokufakwa kwaye zenziwe zisebenze iitshimini kunye neefestile ezinokunceda kulungelelwaniso lweseti yeethayile ngaphandle kokuchaphazela ukusebenza. Iibhetri zePowerwall ezenziwe nguTesla ziyazivumela ukuba zifakwe kuphahla lwelanga ngendlela enokuthi Siqinisekisa ubonelelo lombane xa kunokwenzeka nakuphi na ukusikwa okanye ukucinywa kombane.
Nangona itekhnoloji ihambele phambili ngakumbi kunezinye iimodeli ezindala, akufuneki siyilibale imigaqo-nkqubo yokusebenzisa amandla e-photovoltaic. Ukuba kwindawo akukho sixa sikhulu semisebe yelanga ngokuqhubekekayo, asinakusebenzisa oku kushiyekileyo ngendlela enenzuzo.
Ukuthelekisa iGlasi yelanga kunye nophahla lwangaphambili lwe-V3 yemodeli, ekwavela kwiTesla, sibona oku kulandelayo. Ukuba sine uphahla lwe-100 yeemitha zesikwere apho sine-60% yeethayile zophahla zohlobo lwe-photovoltaic yelanga (Ngumfanekiso u-Tesla ucebisa) kunye nebhetri ye-Powerwall yokugcina amandla, iya kuba neendleko ezipheleleyo malunga ne-45.500 euro. Ngokucacileyo, eli linani eliphezulu ngokwaneleyo ukuba ingenguye wonke umntu onokukufikelela, kungasathethwa ke ke ngabo babucala. Ngesi sizathu, olu tshintsho lobuchwephesha luthetha ukuba le nto inokugcinwa eSpain ngewebhusayithi yeTesla nge-euro eyi-1.000 kwangaphambili.
Abantu abaninzi bayazibuza ngomahluko phakathi koyilo oluqhelekileyo loyilo kunye nophahla lwelanga lweTesla. Kwaye luyilo olunceda ukuncedisa uyilo lwekhaya lakho ngendlela enceda ukuguqula ukukhanya kwelanga kube ngumbane. Esi sibonelelo sinokubonelela ngezibonelelo zokuzisebenzisa kunye nokunciphisa ityala lombane. Yintoni egqithisile, Iyakunceda kulondolozo lwendalo kuba asizukukhupha iigesi zegreenhouse ekutshisweni kwezibaso. Enkosi kwibhetri ye-Powerwall eyakhelweyo, amandla anokuqokelelwa emini kwaye agcinwe ukuze asetyenziswe nangaliphi na ixesha ebusuku. Ngale ndlela, siya kuguqula ikhaya lethu libe yinto efanelekileyo ngakumbi.
Izinto eziluncedo kophahla lweTesla Solar
Kukho izinto ezahlukeneyo kunye noyilo olugqityiweyo olunikezwa nguTesla. Enkosi kwezi modeli zivumela abathengi ukuba babenokhetho oluncinci olunentsingiselo lokuba uphahla luza kubonakala njani. Oku akubanga nophahla lwelanga kudala kuba bekukho iimodeli ezininzi. Obu bugcisa butsha bunokudityaniswa ngaphandle komthungo phantse kuyo nayiphi na indlela yanamhlanje yoyilo. Oku kwenza ukuba kube lukhetho olulungileyo kwabo banini bafuna ukutyala imali eluphahleni olutsha kunye namandla acocekileyo ngaxeshanye.
Ezi tile zeglasi zihlala zomelele kwaye ziqinisekisiwe ngobomi obude benkonzo. Ixabiso linokuphakama kakhulu kwabanye abantu abafuna ukwazi ixabiso lophahla olupheleleyo. Ubungakanani obuqhelekileyo bendlu eUnited States ihlala imalunga ne-230 yeemitha zesikwere. Ngokwezibalo zikaTesla, uphahla olutsha lwelanga luya kubiza malunga ne-50.000 euro, ukuba ne-70% yophahla, iithayile zelanga. Inkampani icebisa ukuba kuthengwe ibhetri ye-Powerwall eyongezelelweyo ebiza malunga ne-6500 euro.
Kuyinyani ukuba onke la maxabiso angothusa umthengi ekuqaleni. Nangona kunjalo, kukho iindidi ezahlukeneyo zokuthengwa kolu phahla kwaye kuyakunciphisa ixabiso lentlawulo yombane ekupheleni kwenyanga. Oku kuya kukunceda ugcine ekuhambeni kwexesha kwaye uyeke ukukhupha ukungcola emoyeni.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nophahla lwelanga leTesla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » Uphahla lweTesla Solar